TOP NEWS: Maxaadan ogeyn oo C/wali Gaas uu Muqdisho u yimid xili maalmo kooban ay ka harsantahay Doorashada Madaxtinimada???+Sawirro – Kismaayo24 News Agency
TOP NEWS: Maxaadan ogeyn oo C/wali Gaas uu Muqdisho u yimid xili maalmo kooban ay ka harsantahay Doorashada Madaxtinimada???+Sawirro
by Tifaftiraha K24 6th February 2017 042
Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas iyo wafdi balaaran uu hoggaaminayay ayaa shalay gelinkii danbe soo gaaray caasimada Soomaaliya ee Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland ayaa waxaa safarka ku wehelinayey gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashi, masuuliyiin ka tirsan goloyaasha Puntland iyo saraakiisha madaxtooyada Puntland.
Ugu horay Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in safarkan isaga iyo wafdigiisu uu salka ku hayo arrimo la xiriira Doorashooyinka Soomaaliya, waxaana uu tibaaxay madaxweynuhu in ay lagama maarmaan tahay in Puntland ay qayb ka ahaato arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya madaama ay Puntland khibrad badan iyo aqoon badan u leedahay arrimahaasi.
Sidoo kale Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in Puntland ay xaq u leedahay inay wax ka ogaato arrimaha Doorashooyinka Soomaaliya islamarkaana ay taageerayso isbedelka ka dhicidoona Soomaaliya.
‘’maanta aniga iyo wafdi balaaran ee aan hogaaminayo oo uu ka mid yahay gudomiyaha Baarlamaanka Puntland waxaan soo gaarnay magaalada Muqdisho oo dhowaan ay ka dhicidoonto doorashadii madaxweynaha Soomaaliya, dabcan Puntland waa qayb muhiima oo ka midda Dowladda Faderaalka waxayna rabtaa inay wax ka ogaato isbedelka ka dhicidoona Soomaaliya, waxaa ku xidhan Masiirkeeda, waxaa ku xidhan horumarkeeda, waxaa ku xidhan wada jirkeeda iyo midnimadeeda Soomaaliyeed markaa inaanu ogaano, korjoogtayno, ka war-qabno waxa kasoo baxaya gabagabada doorashada Soomaaliya waa mid muhiima’’ Ayuu yiri Madaxweynaha Puntland.
Ugu danbayn, Madaxweynaha Puntland ayaa cadeeyey in isaga iyo wafdigiisu ay Muqdisho ku sugnaan doonaan ilaa dhammaadka Doorashada, taas oo ay maalmo kooban ka harsan tahay gunaanadka Doorashada Madaxtinimo ee Soomaaliya.
Daawo: Khudbada Musharax Cumar C/rashiid oo si weyn uga soo muuqatay khudbadihii ay jeediyeen musharixiinta
War cusub: Shabaab oo afar ruux ay basaasnimo ku eedeysay ku gowracday fagaaro ku yaala dagmada….
Dowlada oo wafdi u dirtay Caleema saarka Ugaaska ay sida weyn isku hayaan ee Xawaadle
admin 25th July 2016
KASHIFAAD: Muxuu MD GAAS uga baaqsaday ka qeybgalka Shirka Istanbuul.?.(Arimo Qarsan)
WAR CUSUB: Daawo Mashaqada ka Dhacday Magaalada Jig jiga iyo Dhimashada oo gaartay ilaa…